Android တက်ဘလက်များ - သတင်းများ၊ ကောလာဟလများ၊ စမ်းသပ်မှုများနှင့်အခြားအရာများ! - Androidsis Androidsis
လတ်တလောတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောတည်ထောင်ခြင်းများနှင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များတွင် Android တက်ဘလက်များစွာရှိသည့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုတွေ့နိုင်သည်။ အန်းဒရွိုက် အင်တာနက်နှင့်၎င်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောအရာအားလုံးသည်အားကြီးသောအချက်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ နှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမဆုပ်မနစ်ရှာဖွေရာတွင်နေ့စဉ်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသည်။ ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဒီမှာမတူကွဲပြားတဲ့စတိုင်တွေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါတယ် Android တက်ဘလက်များ, အမျှ Samsung ၏ Galaxy Tab ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောပရိုဆက်ဆာများနှင့်အကောင်းဆုံး RAM မှတ်ဉာဏ်များပါဝင်သည့်၎င်း၏အမျိုးအစားအမျိုးအစားများနှင့်မတူပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Android operating system အဖြစ်တက်ဘလက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းကိုနောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်လ်များ၏နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ ကောလာဟလများနှင့်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းကိုရယူလိုပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Father's Day မှာပေးရမည့်အကောင်းဆုံး Android tablet
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင်ဖခင်များနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုနှင့်အတူပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကြီးကျင်းပရန်နှင့် ...
လာမည့် Galaxy Tab A7 Lite ကိုထပ်မံဖြန့်ချိမည်
ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလက Samsung သည်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီးမှစီးပွားရေးအရအများဆုံးဖြစ်သော Galaxy Tab A7 ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
Galaxy Tab S3.1 အတွက် UI6တစ်ခုသည်အချိန်ဇယားထက်နှစ်လစောသည်
Samsung ကုမ္ပဏီမှသူတို့၏ဖုန်းများကိုမွမ်းမံရန်စိတ် ၀ င်စားကြောင်းပြသနေသည်မှာတစ်ဖန်ဖြစ်သည်။
Samsung က Galaxy Tab S7 ၏ Lite version ကိုထုတ်လုပ်မည်
များစွာသောအသုံးပြုသူများမှာထိုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သောပရိုဆက်ဆာများတွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ မရရန်လိုအပ်သည်။
Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition ကိုထုတ်လုပ်သူရဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
Lenovo Tab P11 ကို 2K panel, Office suite နှင့် Android 10 ဖြင့်တင်ဆက်ထားသည်
နာမည်ကြီးထုတ်လုပ်သူ Lenovo က Tab P11 လို့ခေါ်တဲ့အာရှဈေးကွက်အတွက်တက်ဘလက်အသစ်တစ်မျိုးကိုကြေညာလိုက်ပါတယ်။
Reyes ကိုဘာပေးရမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးလား။ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြင့်သင်အမြဲတမ်းမှန်ကန်လိမ့်မည်
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
နှစ်ရက်အတွင်းပညာရှိသုံး ဦး ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။ နှစ်သစ်ကူးအကြိုပြီးနောက်သင့်ကိုယ်သင်မပေးရသေးပါ။
Galaxy Tab S2 သည်လုံခြုံရေးအသစ်တစ်ခုကိုရရှိသည်
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
ဟုတ်ကဲ့၊ ငါပြောတာကလွန်ခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်ကဈေးကွက်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ Galaxy Tab S2 ပါ။
ဟယ်လိုဝင်းအထူး - ထိတ်လန့်မှုရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောတက်ဘလက် ၃ ခု
por Nerea Pereira လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
ဟယ်လိုဝိန်းလေးထောင့်နားမှာရှိတယ်။ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် ...
သင့်မှာ Galaxy Tab S90 (သို့) S7 + ရှိမယ်ဆိုရင်7Hz မှာ Fortnite ကိုသင်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်
Epic Games သည် Apple နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောမည်သည့်စစ်ပွဲကိုပင်အဓိကထားပါစေ ...
Lenovo မှ Android tablet သစ် ၅ ခုကိုကြေငြာခဲ့သည်
Samsung Galaxy Tab S4 ကိုသြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်
Alkocube X, 2k မျက်နှာပြင်၊ Hifi အသံနှင့် Android 8.1 ပါရှိသည်
Samsung Galaxy Tab S4 ၏ပထမဆုံး rendering ကိုစစ်ထုတ်သည်
10 ၏ထိပ်တန်း 2017 တက်ဘလက်
Xiaomi သည်ဥရောပရှိ "Mi Pad" အမှတ်တံဆိပ်ကို Apple ၏ iPad နှင့်ဆင်တူသောကြောင့်ဥရောပတွင်မသုံးနိုင်ပါ။
2017 ၏အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးတက်ဘလက်များ: ၇ လက်မနှင့် ၁၀ လက်မပုံစံများ
Android Tablets များအတွက် Windows 10-style Launcher
ယူရို ၁၀၀ အောက်အတွက်အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များ
Yootak Chic, သင်ချစ်ရမည့်မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အတွက်သံလိုက်အထောက်အပံ့
Onda V919 AIR DualOS၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစွမ်းထက်သည့် DualOS တက်ဘလက်ကိုပြုံးရယ်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဆန်းစစ်သည်